Ngaba "Ukwahlukana kweCawa noRhulumente" kuMgaqo-siseko?
Debunking Inkolelo: Ukuba ayikho kuMgaqo-siseko, ngoko Awukho
Kuyinyaniso ukuba ibinzana elithi " ukuhlukana kwecawa kunye nelizwe" ayibonakali nantoni na kuMgaqo- siseko we-United States . Kodwa kukho ingxaki, nangona kunjalo, ukuba abanye abantu bafumana izigqibo ezichanekileyo kule nyaniso. Ukungabikho kweli binzana akuthethi ukuba yinto engavumelekanga okanye ukuba ayinakusetyenziswa njengomgaqo-mthetho okanye umgwebo.
Oko uMgaqo-siseko awuthethayo
Kukho naziphi na inani lemiqathango ebalulekileyo yezomthetho engabonakali kuMgaqo-siseko kunye nabantu abachanekileyo abasebenzisa.
Ngokomzekelo, akukho ndawo kwiMgaqo-siseko uza kufumana amagama afana ne " ilungelo lokungasese " okanye "ulungele ukuvavanya." Ngaba oku kuthetha ukuba akukho mmi waseMerika unelungelo lokuzimela ngasese okanye ukulingwa okulungileyo? Ngaba oku kuthetha ukuba akukho mjaji omele akhuphe lamalungelo xa efikelela kwisigqibo?
Ewe akunjalo - ukungabikho kwamagama athile akuthethi ukuba kukho ukungabikho kwezi ngcamango. Unelungelo lokulinga elifanelekileyo, umzekelo, luyimfuneko yento esetekisini ngoba oko sikufumanayo akusikho into efanelekileyo yokuziphatha okanye yomthetho.
Yintoni esiyilungiso sesithandathu somGaqo-siseko ekuthiwa:
Kulo lonke ulwaphulo-mthetho, umtyholwa uya kujongela ilungelo lokutshutshisa ngokukhawuleza kunye noluntu, ngecala elingakhethiyo likaRhulumente kunye nesithili apho ulwaphulo-mthetho luya kwenziwa khona, isiphi isithili esiya kuqinisekiswa ngaphambili ngumthetho, kwaye ukwaziswa uhlobo kunye nesizathu sesityholo; ukujamelana namangqina amelene naye; ukuba nenkqubo enyanzelekileyo yokufumana amangqina ngokusithanda kwakhe, nokuba neNcedo loMcebisi ngokuzikhusela.
Akukho nto "malunga novavanyo olufanelekileyo," kodwa yintoni emele icacile ukuba lo Mhlonyiso ubeka imimiselo yezilingo ezifanelekileyo: uluntu, i-jury, i-juries, ngokungenanto, ulwazi malunga nobugebengu nemithetho, njl njl.
UMgaqo-siseko awuthetha ngokuthe ngqo ukuba unelungelo lokuvavanya, kodwa amalungelo akhiwa nje kuphela engqiqweni ngokuqinisekileyo ukuba unelungelo lokulinga elifanelekileyo.
Ngaloo ndlela, ukuba urhulumente ufumene indlela yokuzalisekisa zonke izibophelelo ezikhankanywe apha ngasentla ngeli xesha wenza i-trial ilungile, iinkundla ziya kubamba ukuba ezo zenzo zihambelana nomgaqo-siseko.
Ukusebenzisa uMthethosisekelo kwiNkululeko Yenkolo
Ngokufanayo, iinkundla zifumene ukuba umgaqo "wenkululeko yonqulo" ukhona kwisiHlomelo sokuQala , nangona loo mazwi engekho.
I-Congress ayiyi kwenza umthetho onxulumene nokusekwa kwenkolo, okanye ukuthintela ukusebenzisiswa kwayo mahhala ...
Ingongoma yesihlomelo esinjalo iphindwe kabini. Okokuqala, kuqinisekisa ukuba iinkolelo zonqulo - ezizimeleyo okanye ezicwangcisiweyo - zisuswa ekuzameni ulawulo loorhulumente. Esi sizathu sokuba urhulumente akakwazi ukuxelela wena okanye ibandla lakho ukuba ukholelwe okanye ufundise.
Okwesibini, kuqinisekisa ukuba urhulumente akabandakanyeki nokunyanzelisa, ukugunyazwa, okanye ukukhuthaza imfundiso ethile yezenkolo, kuquka nokukholelwa kunomaphi na oothixo. Oku kwenzekayo xa urhulumente "emisa" icawa. Ukwenza njalo kwadala iingxaki ezininzi eYurophu kwaye ngenxa yoko, ababhali bomGaqo-siseko bafuna ukuzama ukukhusela okufanayo nokuba kwenzeke apha.
Ngaba nabani na ophika ukuba iSilungiso sokuQinisekisa isiqinisekiso senkululeko yonqulo, nangona loo mazwi engabonakali khona?
Ngokufanayo, iSilungiso sokuQala siqinisekisa umgaqo wokuhlukaniswa kwecawa kunye nombuso ngokubandakanyeka: ukuhlukana kwecawa kunye nelizwe kukuvumela inkululeko yenkolo ukuba ikhona.
Xolotl, Canine UThixo weamawele kunye nokugula kwiNkolo yama-Aztec
AmaBaptist aseMazantsi kunye neNdima yabaTyhini
Ukuthanda v. Virginia (1967)
Yintoni i-Agnosticism? I-Index yeZimpendulo kunye nezibonelelo
Spence v Washington (1974)
UFlip Uphendulela Wonke umntu!
Ukuqubuka komhlaba okukhulu kwiJapan, ngo-1923
IKhabinethi yokuqala yeGeorge Washington
Phakathi kweSilik Road - I-Archaeology kunye neMbali yoRhwebi lwaMandulo
Imizekelo yeZityholo kwiiNtsebenziswano zamazwe ngamazwe
Imyuziyam yase-Oklahoma yeMbali yeNdalo (Norman, OK)
Isikhokelo sokuPenda kwi-Shiny, i-Silver Objects
Abalobi be-All-Time Bestselling Abanikezelayo Emva kobudala 50
Ukuhlaziywa kwe-Six Scout Indian indiza: I-V-Twin Value Proposition
Iifoto zeeReferensi zeeDlalo: i-Seascapes kunye nama-Wave